lundi, 01 mai 2017 21:47
Ambatondrazaka : Lasibatry ny jiolahy ireo Taxi-moto
Moto telo no very tao anatin’ny 24ora ny faran’ny herinandro iny. Ny roa, mody nofain’ireo jiolahy ny sabotsy 29 aprily eo, mba hanatitra any Didy, misy toeram-pitrandrahana safira.
Niangavy mba hijanona hisakafo anefa ireo olona nentina Taxi-moto nony tao Antsevabe, sahabo ho 30km miala an’Ambatondrazaka.
Ireo mpandeha, nanofa Taxi-moto, ihany no nanome sakafo ireo mpitondra. Vao nihinana anefa ireo roalahy dia tsy nahatsiaro tena. Nandritra izany no nanararaotra nangalatra ny moto ireo jiolahy, ary tsy mbola hita hatreto.
Olona sendra nandalo no nahita ireo roalahy nalemilemy, nitsirara tamin’ny tany, no nitondra azy ireo namonjy hopitaly eto Ambatondrazaka.
Efa tsara ny fahasalaman’ny iray, ny faharoa kosa tsy mbola mahatsiaro tena.
Voatsatoka antsy avy any an-damosina kosa no namparatra ny fahatelo, ka nahavery ny moto nentiny.
lundi, 01 mai 2017 21:38
Imerimandroso-Ambatondrazaka : Toeram-pivarotana roa lasibatry ny jiolahy
Tora-bato nandritra ny antsasak’adiny narahina vaky trano no nitranga tao Madiorano, Fokontany iray ao anatin’ny Kaominina Imerimandroso, Distrika Ambatondrazaka ny alin’ny sabotsy hifoha ny omaly alahady 30 aprily tokony ho tamin’ny sivy orana sy fahefany aliny.
Toeram-pivarotana roa lasibatry ny jiolahy roapolo any, io alina io. Very tamin’izany ny vola dimy hetsy sy iray tapitrisa Ariary, niampy entana sy peratra mariazy.
Mirongatra ny asan-jiolahy aty Alaotra amin’izao, mandry andriran’antsy ny mponina.
lundi, 01 mai 2017 21:20
Petite Plage Mahajanga : Vazaha nanary maloto tamin'ny sceau tao anaty ranomasina
Tezitra tamin'ity lehilahy teratany vahiny ity avokoa ny olona nahita ny fihetsika mamohehatra nataony. Avy hatrany dia maloto eran'ny sceau no nariany tao anaty ranomasina mandritra ny fotoana mbola nahabe mpilomano tao anaty rano iny indrindra.
Tsikaritry ny olona avy hatrany izany ary voatery niakatra avokoa ny rehetra. Nisy ireo nentin-katezerana ka nikasi-tanana ilay Vazaha.
Nitangoronan' ny olona teo izy ary efa saika niharan'ny fitsaram-bahoaka raha tsy nalaky tonga ny Chef Secteur avy ao amin'ny Fokontany Amborovy izay nitondra azy avy hatrany tany amin'ny mpitandro ny filaminana.
lundi, 01 mai 2017 21:13
1 Mey : Nampiseho firaisankina ireo vondrona sendikaly teto Tolagnaro
Filaharam-be namakivaky ny tanàna niainga teo amin’ny Lycée Pôle ary nipaka hatrao amin'ny tokontaniben'ny Trésor Bazaribe no nanombohana ny hetsika fanamarihana ny Fetin’ny Asa teto an-drenivohitry ny Faritra Anosy ary nofaranana tamin'ny valandresaka narahina adihevitra tao amin'ny efitrano malalaky ny Tranoben'ny varotra sy ny indostria Bazaribe.
Saika nandray anjara avokoa ireo vondron'ny mpiasa misy eto an-toerana. Na somary ratsy aza ny andro, tsy nahasakana ny hetsika.
lundi, 01 mai 2017 17:35
Fianarantsoa : Tournoi Coupe du Président miaraka amin'ny SOLUMA
Miditra amin'ny dingana famaranana ny lalao Basket-ball nokarakarain'ny fikambanana Solidarité des Leaders Universitaires de Madagascar (SOLUMA) antsoina hoe : Tournoi Coupe du Président.
Nanomboka tamin'ny volana oktobra ny lalao ka hifarana amin'ny 7 mey ho avy izao rehefa niato nandritra ny fialantsasatry ny mpianatra eny amin'ny oniversite.
Efa nahatontosa ny lalao ireo mpikambana tany amin'ny farintanin'i Mahajanga sy Antananarivo.
Tonga manatrika izany aty an-toerana ny filoham-boninahitry ny fikambanana Be-Rija Ravelomanantsoa.
Herintaona nisiana ny SOLUMA. Ity hetsika tantetahana manerana ny nosy ity no fanentanana voalohany tanterahan'izy ireo.
lundi, 01 mai 2017 17:26
Mahajanga : Rangahy iray maty tsy tra-drano noho ny lozam-pifamoivoizana
Teny Manapatanana, lalana mihazo an'Amborovy, no nitrangan'ny loza ny alin'ny alahady teo. Fiara iray nirimorimo no nandona mpivady nitondra bisikileta ary nahafaty teo noho eo ilay raim-pianakaviana.
Naratra mafy kosa ilay ramatoa, tapaka ny feny ary eny amin'ny hopitaliben'Androva izy mitsabo tena.
Nitsoaka kosa ny mpamily ilay fiara namoa-doza. Nifanenjehan'ny fiaran'ny Polisy izay tsy lavitra teo saingy tsy tratra ary mbola ifampitadiavana.
Nanararaotra ny fahamaizinana noho ny jiro tapaka rahateo ity mpamily ity ka nanamora ny fitsoahany tami'izany.
Izay manam-baovao ka mety mahafantatra ilay mpamily nitsoaka, dia aoka ampilaza ny Polisy akaiky azy.
lundi, 01 mai 2017 17:08
Village Touristique - Mahajanga : Hita ny razana faharoa
Hita tamin'ny 11 ora atoandro teo ihany koa ny vatana mangatsiakan'ilay tovolahy 25 taona natelin'ny ranomasina omaly hariva.
Ilay zazavavikely 10 taona sisa no mbola karohina.
Fahoriana tsy roa aman-tany ny mahazo ireo fianakaviana ety amin'ny Fokontany Fiofio Faritra fahatelo ireto.
Efa malaza mpaka olona ny ranomasina ety amin'ny Village Touristique ary efa nisy soratra nandrara ny tsy tokony hilomanosana teny an-toerana teo aloha saingy nanjavona izany taty aoriana.
Efa elaela ihany koa tsy nitrangana loza mahatsiravina teny ka zary varimbariana sy mahasahisahy ireo mpitsangatsangana, tsy mahatandrina fady nialohan'ny nirobohana tao anaty rano.
lundi, 01 mai 2017 09:57
Mahajanga : Ramatoa iray 56 taona tratra nitaingim-pasana, nambenana mafy ny alina
Efa voatana eny amin'ny biraon'ny Police Centrale ity ramatoa 56 taona, tratran'ny andrimasom-pokonolona omaly teny amin'ny fasan'ny karana Mahavoky Avaratra.
Niboridana sy nandihy ary nihoso-menaka teny ambony fasana moa izy no tsikaritr'ireo mpiambina, ka avy dia nosamborina.
Nambenan'ny Polisy fatratra izy io alina io, sao miporitsaka, ary ny fokonolona ihany koa nikasa ny hanao fitsaram-bahoaka.
Ho atolotra ny Fampanoavana izy aorian'ny fanadihadiana.
lundi, 01 mai 2017 09:37
Village Touristique-Mahajanga : Hita ny razana iray, zaza 14 taona
Efa hita ny vatana mangatsiakan’ilay ankizivavy 14 taona iray tamin'ireo telo mianaka, roa lahy sy vavy iray, natelin'ny ranomasina teny amin'ny Village Touristique omaly.
Mbola mitohy kosa ny fikarohana ireo roa hafa. Tokony ho tamin'ny 11 ora sy sasany alina no nahitan'ireo mpamonjy voina ny razana.
Ny mpamonjy voinan' ny Kaominina Mahajanga Renivohitra, miaraka amin' ny Zandary ary ny Polisy no miara-miasa manao ny fikarohana.